तपाईं रूसी को क्षेत्र मा यात्रा भने गरेको कहिल्यै र पासपोर्ट बिना विदेश आराम गर्न यस वर्ष निर्णय तपाईं सक्दैन। यसको रसिद त कुनै समस्या आउँदै यात्रा द्वारा marred छैन, अग्रिम हेरचाह गर्न आवश्यक छ। तपाईं पहिलो के तपाईं आफ्नो पासपोर्ट, पुरानो वा नयाँ नमूना चाहनुहुन्छ निर्णय गर्न, र राहदानी लागि सबै आवश्यक कागजात सङ्कलन गर्न आवश्यक छ।
को 'पुरानो शैली पासपोर्टको लागि सूचीबारे।
एक वयस्क लागि:
रूसी संघ को पासपोर्ट को भित्री पृष्ठ को प्रत्येक फोटोकपी;
छाप हुनुपर्छ र हस्ताक्षर प्रत्येक जो कार्यस्थल मा टाउको दुई प्रतिहरू मा एक पासपोर्टको लागि आवेदन;
एक गोलो मैट मा चार चित्र, आकार मा 3.5x 4.5 सेमी;
प्रत्येक पूरा पृष्ठ कार्यपुस्तिका को प्रतिहरू कार्यस्थल मा stamped। व्यक्ति सेवानिवृत्त वा काम गरिरहेको छैन भने, मूल रोजगार रेकर्ड दुवै को प्रतिहरू प्रदान;
पासपोर्ट पहिले नै प्राप्त गरेको छ भने गरिएको र यसलाई परिवर्तन गर्न, तपाईंले आफ्नो सबै व्यक्तिगत डाटा (नाम, जन्म र मुद्दा को मिति तारीख) जसमा मुख्य पृष्ठ को फोटोकपी, प्रदान गर्नुपर्छ;
मानिसहरू 18-27 वर्षको एक फोटोकपी प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ लागि पहिचान कार्ड को रूसी सेना मा सेवा वा सैन्य परिणामस्वरूप, 32 को रूप मा प्रमाणपत्र संग stamped;
पेंशनरहरुलाई लागि पेन्सन प्रमाणपत्र प्रतिलिपि प्रदान गर्न आवश्यक हुनेछ।
पासपोर्ट मा कागजातहरू, 14 देखि 18 वर्ष छोराछोरीलाई लागि आवश्यक हुनेछ:
बच्चा को रूसी संघ को पासपोर्ट को प्रत्येक पृष्ठ, पासपोर्ट को रसिद को समयमा मूल को प्रावधान संग को प्रतिहरू;
को बच्चा द्वारा जारी एक जन्म प्रमाणपत्र को फोटोकपी;
बच्चा रूसी नागरिकता उपस्थिति को फोटोकपी सम्मिलित;
बच्चा पहिले नै पासपोर्ट थियो भने र तपाईंले यसलाई परिवर्तन गर्न, तपाईं मुख्य पृष्ठ को फोटोकपी प्रदान गर्नुपर्छ भएको फोटो, नाम, मुद्दा र बच्चाको जन्म मिति मिति; दुई प्रतिहरू अभिभावक द्वारा हस्ताक्षर प्रत्येक आवेदन फारम;
अभिभावक को रूसी संघ को पासपोर्ट को प्रत्येक पृष्ठ को प्रतिहरू;
4.5 सेमी को आकार 3.5x छ जुन एउटा गोलो, चार मैट फोटो।
पासपोर्ट मा कागजात, छोराछोरीलाई लागि आवश्यक हुनेछ 14 वर्ष मुनिका:
एक प्रतिलिपि अभिभावक द्वारा हस्ताक्षर मा एक पासपोर्टको लागि आवेदन फारम;
दर्ता को टिकट संग बच्चा द्वारा जारी एक जन्म प्रमाणपत्र को फोटोकपी (तपाईं एउटा निकाल्ने आवश्यक हुनेछ घर रजिस्टर वा दर्ता प्रमाणपत्र) , र बच्चा को उपस्थिति रूसी नागरिकताको ;
को गोलो आकार 3.5h4.5 सेन्टिमिटर चार मैट फोटो।
पासपोर्टको लागि बस आवश्यक कानुनी लागत तिर्न। भन्दा कम आधा एउटा वयस्क लागि टिकट कर्तव्य को 14 वर्ष मुनिका बच्चाहरु। केही कारण लागि एक राहदानी अस्वीकार भने, राज्य शुल्क पूर्ण वा भाग मा फिर्ता गरिनेछ। इन्कार आधारित जारी गर्न मात्र संघीय व्यवस्था द्वारा stipulated परिस्थिति मा। पासपोर्ट (बायोमेट्रिक) मा कागजातहरू पुरानो शैली पासपोर्ट मा जस्तै संरचना मा खुवाइन्छ नयाँ नमूना, तर आवेदन फारममा ट्याग गर्न।
यस प्रश्नावली मा भर्दा - आवेदन थाहा आवश्यक:
आवेदन इलेक्ट्रोनिक रूपमा वा हात द्वारा भर्न सक्छन्। स्वयं भर्दा, तपाईं मसी नीलो वा कालो प्रयोग र राजधानी पत्र मा लेख्न सक्नुहुन्छ;
झूटा कागजात र विवरण निर्दिष्ट छन् जो जानकारी, को पूर्णता प्रदान लागि दायित्व स्थापना;
को नागरिक उमेर 18 वर्ष, त्यो कागजात पेश र जब व्यक्ति मा आवेदन भर्न पर्छ;
बच्चाहरु माथि 18 वर्ष को लागि, आमाबाबुले पेश सबै कागजातहरू;
आवेदन हुनेछ व्यक्तिगत डाटा तर संघीय व्यवस्था अन्तर्गत रूस देखि प्रस्थान रोक्न सक्छ उपस्थिति वा अनुपस्थितिले कारण मात्र छैन।
तखतालाई जीवन ग्यारेन्टी अवधि र सेवा जीवन, फरक छ
बिक्री कार को सम्झौता
एक जानकारी सिस्टम को प्राविधिक डिजाइन के हो?
पुरुष र महिला दुवै लागि संयुक्त राज्य अमेरिका मा अवकाश उमेर: सुविधा र गणना नियम
एडिनोमोसिस: लक्षण, कारणहरू र उपचार
"शेवरलेट Epica": उच्चतम स्तर मा प्राविधिक विनिर्देशों
शैक्षणिक संस्थान, Stavropol ठेगाना, विभाग, शाखा। Stavropol राज्य शैक्षणिक संस्थान (SSPI)
सर्दिस टायर राख्दा कहिले? कस्तो प्रकारको जाडो टायर?
बाडेन (अस्ट्रिया): को रिसोर्ट आकर्षण, होटल र देश एउटा भिसा